RESIDENCE Mvumo MUNYIKA DZENYIKA
nemunyori: Max Csern Chivabvu 11, 2021
Pane zvakawanda zvingasarudzwa zvekuwana mvumo yekugara muEurope. Zvimwe zvakaoma, zvimwe zviri nyore. Izvo zvese zvinoenderana nemitemo yekutama yeimwe nyika, yemamiriro emunhu anokumbira uye zvinangwa zvekufamba. Naizvozvo, hapana nzira yepasirese yekuwana mvumo yekugara muEurope nekukurumidza uye nyore. Mune mamwe matunhu, maitiro aya anenge ari nyore kuvaRussia, nepo kune mamwe acho achaomeswa nemimwe mamiriro ekuwedzera. Mushure mekuongorora mitemo yekutama yenyika gumi nemana dzeEuropean uye neruzivo rwevagari veko vatamira imomo, takanyatso tarisa. Mushure mekuverenga, vaverengi vanozowana kuti ndezvipi zviri nyore kuwana mvumo yekugara uye kugara zvachose muEurope. Zvimwe zvikonzero zvinoita kuti ubudise mvumo yekugara nevakuru vezvekufambiswa kweimwe nyika uye nemutengo wese wegadziriro unowanikwa pano.
Mvumo yekugara munyika dzeEurope
Sarudzo dzekuwana mvumo yekugara muEurope mijenya. Zvimwe zvakaoma, zvimwe zviri nyore. Izvo zvese zvinoenderana nemitemo yekutama yeimwe nyika, yemamiriro emunhu anokumbira uye zvinangwa zvekufamba. Naizvozvo, mabikirwo epasirese anokurumidza uye nyore kuwana Residence mvumo muEurope, kwete. Mune mamwe matunhu, maitiro aya anenge ari nyore kuvaRussia, nepo kune mamwe acho achaomeswa nemimwe mamiriro ekuwedzera. Mushure mekuongorora mitemo yekutama yenyika gumi nemana dzeEuropean uye neruzivo rwevagari veko vatamira imomo, takanyatso tarisa. Mushure mekuverenga, vaverengi vanozokwanisa kuziva ndeipi nzira iri nyore yekuwana mvumo yekugara и Kugara zvachose muEurope... Zvimwe zvikonzero zvinoita kuburitswa kwemvumo yekugara nevakuru vekutama kweimwe nyika uye mutengo wese weiyi nzira wakapihwa pano.
Kubatsira kwemvumo yekugara muEurope
Kune zvikonzero zvakawanda zvevaRussia kuti vawane mvumo yekugara muEuropean Union. Heano makuru acho:
Yakakwira mwero uye mhando yekugara.
Hugadzike hupfumi, zvinokanganisa kuumbwa uye kusimudzira kwebhizinesi.
Mikana yekuwana zvikwereti pachikwereti chemubhadharo wepasi.
Iko kugona kuvhura madhipatimendi mumabhangi eEurope ane yakanyanya kuvimbika chiyero.
Yakavimbiswa inviolability yemunhu chengetedzo, mari, mari uye zvakavanzika pfuma.
Yemahara vhiza-yemahara yekufamba muEU nyika uye nenyika zhinji dzepasirese dzakapedza dzakakodzera zvibvumirano neEuropean Union.
Kuwana dzidzo yemhando yepamusoro uye hutano, mabasa anobhadhara zvakanyanya.
Kune vanhu vazhinji, mvumo yekugara yeEU ingori nhanho yekutanga yekuwana hukama hweEuropean.
Ndeipi nzvimbo iri nyore uye nzira yekuwana mvumo yekugara
Mubvunzo wekuti ndeipi nzira iri nyore yekuwana mvumo yekugara iri kupokana. Izvo zvinodikanwa kuti utarise huwandu hwehupenyu hwemutorwa, zera, fundo, chinzvimbo chemagariro uye zvimwe zvinowedzerwa. Muzhinji, kusarudzika kwakanyanya uye, nekudaro, zvimwe zvipingaidzo zvehurongwa zviripo munyika dzakabudirira mune zvehupfumi izvo zvisingade kukwezva vanoenda kune dzimwe nyika. Izvi zvinosanganisira United Kingdom, Sweden, Luxembourg, Holland. Panguva imwecheteyo, mvumo yekugara yeEuropean inogona kupihwa zvinoenderana nezvakakosha zvirongwa zvinoshanda munzvimbo dzinoverengeka. Chinangwa chezvirongwa izvi kukwezva nyanzvi dzinoenda kumusika wepamba. Zvakare, mvumo yekugara muEurope inowanzo kupihwa kune vakapfuma vatyairi vanokwanisa kuisa imwe huwandu muhupfumi hwenyika. Paavhareji, saizi yayo inotanga kubva ku350 zviuru €, uye chimiro chemari chakasiyana. Pakati pesarudzo huru dzekuwana mvumo yekugara muEurope, unofanirwa kuratidza:
Kutenga kwepfuma isingazungunuke muEU yemutengo usinga pfuure pane yakatarwa chiyero. Iyi ndiyo imwe yenzira dzakajairika kuwana mvumo yekugara yeEU. Inokodzera vazhinji vakapfuma maRussia vanoda kuenda kuEuropean Union.
Investment mune hupfumi hwenzvimbo. Inotendera, pamusoro pekuwana mvumo yekugara, zvinobatsira kuisa mari dzako mumasheya eEuropean kana mubhizinesi rakatsiga rinobatsira.
Kunyoresa yako kambani uye kugadzira mabasa kune vagari. Mukana wakakura wesarudzo iyi mukana wekuti muzvinabhizinesi akudziridze rake bhizinesi mumamiriro ezvinhu akasimba ezvehupfumi, kusavapo kwehuori uye zvipingamupinyi zvehutongi.
Kuroora uye mugari kana mugari wenyika yeEurope.
Kuwana mvumo yekugara muEurope kuburikidza nebasa pasi pechirongwa chakakosha chinopa mhedziso yesangano rakavhurika-mushandirwi newaunoshandira. Vashandi vemwaka vanoshandirwa kwenguva yakatarwa havakodzere muyero uyu.
Kubatanidzwazve kwemhuri. Mukana uyu unogona kushandiswa nehama dzepedyo dzemugari weEU - vakaroora nevana, uye dzimwe nguva vabereki (vanowana pension, varombo, vakaremara).
Dzidzo mune inzvimbo yekudzidzisa ine nyika kubvumidzwa. Mune dzimwe nyika, mvumo yekugara muEU inopihwa yekutora makosi ekudzidza nekuvandudza mutauro wemuno.
Basa resainzi pasi pesungano nesangano rekudzidzisa kana rekutsvaga.
Basa rine chekuita nekugara padunhu renyika yeEuropean. Vashandi vemadhipatimendi emumiriri uye vamiririri vepamutemo (sainzi, bhizinesi, tsika) vanowira pasi pechikamu ichi.
Yenguva refu kurapwa uye yekuvandudza kosi.
Residence mvumo muEU yeakakosha hunhu. Iyo inopihwa pane wega hwaro, kazhinji nemutemo wega wega wemusoro wenyika kana nechirevo cheparamende.
Mvumo yekugara yenyika - kuchengetedza hunhu hwenyika kana hwetsika.
Mushure mekugamuchira mvumo yekugara, mutorwa anowana kodzero yekuzopa pekugara zvachose muEurope, pamwe nezvimwe zvakati wandei zvaunofarira. Semuenzaniso, munhu akadaro anokwanisa kutora masitendi epasi ari ega muridzi uye oita zvimwe zviito zviri pamutemo zvisingawanikwe kune vamwe vatorwa. Tevere, isu tichafunga nezve nuances yekuwana mvumo yekugara muEurope, uko kuri nyore uye kuchipa kuita izvi.
Sarudzo inosarudzika yekuwana mvumo yekugara muAustria ndeyeRWR-Karte. Iyi ndiyo inonzi "kadhi dzvuku-chena-dzvuku" rakapihwa nenyanzvi. Vanyoreri veRWR-Karte vanofanirwa kupfuudza cheki nemasangano ehurumende kutevedzera zvakasimbiswa zvehunyanzvi, izvo zvinosanganisira zvinoverengeka zvakasiyana maitiro.
Mutengo. Kunyoreswa kwemvumo yekugara nekadhi dzvuku-chena-kadhi kunodhura kubva pa30 kusvika ku € 100.
Conditions. Kazhinji kazhinji, vanamuzvinabhizimusi vanonyorera iyi nzira yekuzvarwa muAustria. Vanodikanwa kuti vatore pfungwa kubva kubazi rezvevashandi vehurumende pamusoro pezvakanakira zviitiko zvebhizinesi zvehupfumi hwenyika.
Kune vanhu vane mutengo wakakwira - chinzvimbo hachivatenderi kuti vashande uye vaite bhizinesi muAustria. Inoburitswa maererano neyakaganhurirwa zviga zvega zvega zvehurumende. Iye anenge achinyorera anozodikanwa kuti ape humbowo hwehuwandu hwepakati pamwedzi mari yeinosvika 2000 € kune yega yemhuri yake. Mune rimwe remabhangi anoshanda muAustria, panofanira kuve neinosvika zviuru makumi maviri zvezviuru zvemunhu mukuru uye zviuru gumi kumwana mudiki.
Kadhi reblue. Nyanzvi dzakabhadharwa dzinogona kuwanikwa kana vaine kukokwa zviri pamutemo kubva kumushandi weAustria, muchibvumirano chebasa iro huwandu hwemari yemwedzi wega wega hausi pasi pe4100 €.
Iko mukana wekuwedzera mvumo yekugara yakawanikwa zvinoenderana nedanho rekubatanidzwa kwemugari wekunze muhupenyu hwenzanga yemuno. Iwe unofanirwa kugara uchivandudza hunyanzvi hwako hwemutauro, kupa vana kumasosi edzidzo emunharaunda, kuburitsa marapirwo uye magariro inishuwarenzi marongero.
Nzira dzakajairika dzekuwana mvumo yekugara muHumambo hweBelgium ndeidzi:
Chibvumirano chebasa newaunoshandira muBelgium.
Kutenga kwekambani yekutengesa yatove yakanyoreswa muBelgium.
Kuvhura rako pachako bhizinesi pano, zvinoenderana nemutero wepagore unobvisirwa unenge 90 zviuru €. Izvi zvinoreva kuti kambani haisi yekunyepedzera asi ichishanda nesimba.
Kunyoresa mutengo - kutanga kubva zviuru makumi matatu €.
Conditions. Kuburitswa kwemvumo yebasa muhumambo hweBelgium kwakatemerwa. Zvimwe zviga zvakapihwa kune vanokwanisa nyanzvi dzinoshanda mumunda weIT-matekinoroji, hutano, vanhu vane huinjiniya dzidzo. Izvo zvakare zvinoita kuti uwane pekugara mvumo kune vadzidzi vanonyoresa muBelgian mayunivhesiti.
Zviri nyore kuwana mvumo yekugara pano kupfuura kuWestern Europe. Zvikonzero zvikuru zvekuzvipa apa ndezvi:
Kuwanika kwemubhadharo wekurega basa.
Kunyoreswa kweanomiririra hofisi yekambani yekutengesa ine kunyoreswa kunyoreswa nevakuru vemitero.
Kutanga bhizinesi nekusikwa kweanopfuura gumi nemaviri maficha evagari veBulgaria
Mhedziso yemubatanidzwa wemuchato nemugari / mugari weBulgaria kana chero nyika yeEU.
Kuvapo kwemadzinza eBulgaria.
Conditions. Munyoreri anosungirwa kusangana nezvinodiwa, zvinoenderana nezvinangwa zvekutama. Kuve nedzimba muBulgaria - ingave ndeyako kana mune yenguva refu-yekuhaya, uye nzira dzekurarama. Nyora padanho remari yako uye nyorera inishuwarenzi yekurapa mutemo. Iwo mazwi ekufungisisa echikumbiro chakatumirwa haapfuure mwedzi mumwe.
Mariro. Kana chinangwa chekupa mvumo yekugara chiri chekutenga zvivakwa, saka kukosha kwayo kunofanira kudarika mazana matatu ezviuru. Kune varimi, chikamu chezasi chekudyara chiri 300 zviuru €, uye idzi dzinofanirwa kunge dziri nzvimbo dzisina kusimukira, kwete guta guru nenzvimbo huru. Kuwanikwa kwezvivakwa kana kudyara kunogona kuitwa kwete chete nevanhu, asiwo nemasangano epamutemo. Ipapo kodzero dzemvumo yekugara dzinowanikwa nevaridzi veichi chimiro chebhizimusi, vane yavo inopfuura 125% yeguta rakabvumidzwa. Kune vekunze vanonyorera kune zvimwe zvikonzero, zvinodikanwa kuti uve nezvinopfuura zviuru zviviri zvemadhora pane dhipoziti.
Kuwana UK mugari wemo kwakaoma. Nzira yakanakisa yekuwana mvumo yekugara pano ndeye kushandisa VIP kupihwa. Iyi nzira yakareruka ndeyekuwana chinzvimbo mukati memavhiki masere mukutsinhana kwekudyara kwakakosha. Iyi inotevera sarudzo dzekudyara dzinogoneka:
Kutengwa kwezvivimbiso zvehurumende.
Kutengwa kwemasheya emunharaunda mari yekudyara.
Kuwana kwekufarira mumafemu akanyoreswa pachitsuwa uye vagari vekuUK mutero.
Conditions. Paunenge uchiisa mari, unogona kushandisa rako chete capital, uye kwete yaakwereta mari. Kwakatangira mari yakaiswa mari kunofanirwa kunyorwa. Kana vaviri vakaroora vakawana mvumo yekugara muUK, mari yavo yekudyara inofungidzirwa.
Mariro. Kuti uwane mvumo yekugara yeBritish pasi peyakareruka VIP kupihwa, uchafanirwa kuisa mari inosvika mamirioni maviri emadhora mukusimudzira hupfumi hwenyika. Iko kumhanyisa kwekupa chinotevera chinzvimbo chekugara zvachose chakanangana nehukuru hwenzvimbo dzakasimwa:
2 kusvika 5 mamirioni mapaundi - makore mashanu.
5 kusvika 10 miriyoni - makore matatu,
Anopfuura mamirioni gumi - makore maviri.
Zvichida nyika ino ndiyo sarudzo yakanakisa yevaRussia vari kushamisika nezve mvumo yekugara muEurope: uko kuri nyore uye kuchipa kuitora. MuHungary, zvinokwanisika kuiburitsa nekukurumidza sezvinobvira kupfuura mune dzimwe nyika dzeEU - mumavhiki matatu chete. Izvi zvido zvinopihwa kune vanhu vane imwe mwero wemari.
Mariro. Hukuru hwekudyara hunofanira kupfuura mazana zviuru mazana matatu pamhuri yemunhu anenge achinyorera. Uyezve, mubhadharo wenguva imwe chete wemakumi matanhatu ezviuru € unobhadharwa.
Conditions. Chirongwa chekutama kwehupfumi chinopa mari yakananga yemari muzvisungo zvehurumende pamwe nekudzoserwa kwakavimbiswa mukati memakore mashanu emakore. Mushure mekupa mvumo yekugara mukati memavhiki matatu, investor anogona kunyorera kugara zvachose mushure memwedzi mitanhatu. Dzimwe sarudzo dzinosanganisira:
Kuvhura kambani yekutengesa ine mvumo capital inokwana zviuru gumi zveeuros. Anofanirwa kuitisa basa rekushambadzira uye kubhadhara mutero kubhajeti. Mvumo yekugara inopihwa kwete chete kune muridzi webhizinesi, asiwo kumhuri yake yese.
Kutenga kwezvivakwa zvinosangana nezvimwe zvinodiwa. Iyo yepasi mutengo chikumbaridzo hachina kuiswa pano, asi avhareji mutengo wemafurati muHungary yekumashure haapfuure zviuru makumi maviri nezvishanu €. Uye zvakare, iyo account yeiye anonyorera uye yega yehama yake yepedyo inofanirwa kuve neinopfuura 25 €.
Muzviitiko zviri pamusoro apa, kuwana pekugara zvachose kunogoneka mushure memakore matatu, uye mugari weHungary - mushure memamwe makore mashanu. Izvi zvinopa huwandu hwamakore masere.
Germany inosiyaniswa nemhando yepamusoro yehupenyu hwevagari uye, nekudaro, huwandu hwakawanda hwevanhu vanoda kutamira pano pekugara zvachose. Naizvozvo, zvakati omei kuwana mvumo yekugara kuGerman, kunyanya tichifunga zviitiko zvazvino - kusadzora kwevanhu vanobva kuMiddle East nedunhu reAfrica. Sarudzo inodhura kwazvo yekuwana mvumo yekugara muEurope kuburikidza neyeGerman yekufambisa mabasa ndeyekudyara muhupfumi hweGerman hweinosvika hafu yemiriyoni €. Nekudaro, iwe unogona kuvhura kambani ine vashanu vagari vemuGerman vanoshanda mairi. Mumwe mamiriro: mugari weFederal Republic yeGerman kana munhu ane chinzvimbo chekugara zvachose anogona kuve CEO.
Dzimwe sarudzo dzinogona kuitika:
Zvemari solvency. Huwandu hushoma hweakaundi yemunyoreri hwakagadzwa zvakazvimiririra neimwe yeiyo nyika yeFGG.
Kadhi rebhuruu. Inotumirwa chete kune vane hunyanzvi nyanzvi dzakakokwa kubva kunze kwenyika nemushandirwi wemuno.
Kuisa mari mubhizinesi mune yakatarwa nzvimbo. Iye anenge achinyorera anofanira kunge aine hupfumi, aine hunyanzvi hwebhizimusi, uye achipa rakadzama bhizinesi chirongwa. Kubva 2012 chikamu chidiki chekudyara kwemamiriro aya chakamiswa.
Iwe unogona zvakare kuwana yekugara mvumo pano nekuda kwezvikonzero zvinotevera:
Dzidza kunzvimbo yemunharaunda yekudzidzisa.
Kupa hupoteri hwezvematongerwo enyika.
Pakatarisana nemamiriro enedzimwe nyika dzeEU, kupihwa kwekutama kwezviremera zveGreek kunoratidzika sekuyedza zvikuru. Izvo zvinokwanisika kuwana mvumo yekugara muEuropean Union mukati memwedzi. Izvi zvinoda kuisa mari yakati wandei muzvivakwa kana hupfumi hweGreek. Izvi zvinogona kuva:
Kugadzirwa kwebhizinesi nyowani bhizinesi kana kutengwa kweiyo iripo. Huwandu hwemashandisirwo hunofanirwa kudarika mazana matatu ezviuru.
Kuwanikwa kwezvivakwa zvemazana mazana maviri nemakumi mashanu emadhora pamunhu anokumbira, kana zviuru mazana mashanu zvemhuri.
Conditions. Muchengeti anopiwa nehuwandu hwehuwandu hwezvipo. Izvo zvinodikanwa zvekumanikidzwa kugara muGreek kwemazuva 183 mazuva ese zvakanzurwa. Sarudzo yakadaro ine ingangoita zana muzana inovimbisa kupihwa mvumo yekugara.
Dzimwe sarudzo. Vapfumi mune zvemari vanoenda kune dzimwe nyika vanogona kuisa anokwana zviuru makumi maviri nemana emaeuro mumaakaundi avo mune chero emabhangi eGreek. Kana danho rikarongwa nemhuri yese, saka zvinonakidza kuisa 24% kune mumwe wako uye imwe 20% kumwana mudiki. Iwe unofanirwa zvakare kuve nemagwaro anosimbisa avhareji pamwedzi mari inopfuura 15 zviuru €.
Panyaya yemutemo wekutama, humambo hweScandinavia hunofungidzirwa senyika inochengetedza uye yakavharwa EU. Iko kupihwa kwemvumo yekugara pano inosanganisirwa neyakaomarara quotas. Nzira iri nyore yekuwana danish yekugara mvumo ndeye bhizinesi rekudyara: kuvhura rako bhizinesi pano, kutenga iripo kambani yekutengesa kana chikamu chemasheya ayo.
Mariro. Iko kushoma kwekudyara kunofanira kupfuura zviuru makumi mashanu €.
Conditions. Iyo kambani iri kuvhurwa inofanirwa kuve neveDanish zvizvarwa mudunhu, uye zvakare kutevedzera zvese zvinodiwa mutero, zvevashandi nemimwe mitemo yenyika. Mvumo yekugara kana bhizinesi rekudyara rakapihwa kwemwedzi gumi nemaviri, uye ichafanirwa kuvandudzwa gore rega rega kwemakore matatu.
Sekureva kwemutemo weIrish, kuitira kuti uwane mvumo yekugara, kudyara kwakabatana kunotenderwa: kudyara muhupfumi uye kutora kwezvivakwa.
Mariro. Iwo mashoma emitengo ari angangoita miriyoni imwe €. Pakati peizvi, hapana anopfuura makumi mashanu muzana anotenderwa kushandiswa pazvivakwa, uye zvimwe zvese zvinofanirwa kuenda nenzira yekudyara muhupfumi hwechitsuwa ichi. Uku kunogona kuve iko kutenga kweveruzhinji kana yakazvimirira ezvokutengeserana kuchengetedzeka, kutengwa kwedanda mubhizinesi, kana kambani yese inoshanda.
Conditions. Mari inofanirwa kuitwa pasina kushandiswa kwemari dzakakweretwa. Mukweretesi anofanira kupa magwaro anosimbisa kudyara kwake, kwete mari yebhangi. Kune nhengo dzemhuri yake, mvumo yekugara inopihwa pasina kumwe kubhadhara uye mari.
Zvekutenga zvivakwa zveimwe huwandu muSpain, zvinokwanisika kuwana "mvumo yekugara yegoridhe". Unogona kutenga pekugara, yekutengesa zvivakwa, kana ivhu.
Mariro. Iko kushoma kwekudyara kwekuwana "yegoridhe mvumo yekugara" ndeye zviuru mazana mashanu.
Conditions. Iyo nguva yekuitisa haipfuure mwedzi. Mushure mekuwana chinzvimbo ichi, zvakaringana kuti mutorwa agare kuSpain kwete rinopfuura zuva rimwe pagore. Mamiriro akawanikwa haape mukana wekuita chero chiitiko chebasa. Izvi zvinoda mvumo yakaparadzana. Mushure memakore mashanu, unogona kunyorera kugara zvachose, uye kana uchigara muhumambo kwemakore gumi, unogona kunyorera kuva chizvarwa cheSpain.
Kutengwa kwezvisungo zvehurumende zvinosvika mamirioni maviri emadhora.
Kuisa mari inodarika mamirioni e1 € muzvikamu zvemakambani eSpain kana kuwana chikamu mune iro rakabvumidzwa guta.
Kuvhura dhipoziti mune rimwe remabhangi ehumambo kwemamirioni 1 €.
Kugadzira bhizinesi muhumambo nekugadzira mabasa kune veSpanish vemunyika. Mutemo wekutama hautarise saizi reprojekti yekudyara mumari, asi kambani inofanirwa kushanda nesimba, ichipa mari yemutero kubhajeti. Izvo zvakare zvinosungirwa kutevedzera kodhi yebasa uye zvimwe zvinodiwa zvemitemo yemuno.
Zvinoenderana nemitemo yekuItari yekufambisa, kupihwa kwemvumo yekugara pano inzira yega yemunhu, achifunga zvinoverengeka zvinhu. Naizvozvo, iye anenge achinyorera haana kuvimbiswa 100% sarudzo yakanaka pane chakatumirwa chikumbiro. Zvichienderana neruzivo rwekuwana mvumo yekugara yeItaly, tinogona kutaura kuti nzira yechokwadi ndeyekutsvaga basa musangano repanzvimbo. Chibvumirano chebasa nemutorwa chinopa: kupihwa kurapwa, kupihwa dzimba nekuchengetedzwa munharaunda. Unogona kupedzisa chibvumirano usati wapinda muItari uye kana wasvika panzvimbo iyoyo.
Dzimwe sarudzo. Kuvhura yako yekutengesa bhizinesi. Iko kutanga kwekudyara mubhizinesi kunofanirwa kudarika zviuru gumi zveeuros. Iwe zvakare unozofanirwa kuwana mvumo kubva kuzviremera zvemuno kuvhura bhizinesi uye rezinesi rudzi urwu rwechiitiko. Dzimwe nguva aya matanho maviri ndiwo anonetsa zvikuru.
Cyprus zvakare ine chirongwa chayo chekudyara, icho chinokutendera iwe kuti ubudise mvumo yekugara pano mukutsinhana nekutenga kwezvivakwa.
Mariro. Zvaunoda pakuwana mvumo yekugara zvinopihwa panoperera gwaro rekutenga nedzimba muhuwandu hwemazana mazana matatu emadhora kana kupfuura. Chimwe chiitiko chinoratidza humbowo hwemari yegore inopfuura zviuru gumi nezvishanu, uyezve zviuru zvishanu pamumwe wemhuri yemunyoreri.
Conditions. Kana izvo zvimisikidzwa zvasangana, sarudzo yakanaka pachikumbiro chakatumirwa inoitwa mukati memwedzi mitatu. Kuwanikwa kwezvivakwa pamutengo unosvika mazana matatu ezviuru zvakare kunopa kuwana mvumo yekugara, asi iine garandi yakaderera uye nenguva yakareba yekufunga. Zvakare, chinzvimbo chinogona kupihwa chete kwegore, iine kudikanwa kwekuvandudzwa kunotevera.
Mune ino Baltic republic, kana uchitenga zvivakwa muhuwandu hwe250 zviuru €, zvinotenderwa kuwana "mvumo yekugara yegoridhe". Zvimwe zvinhu
Chinhu chimwe chete chezvivakwa chinotengwa pamutengo uyu.
Izvo zvinorambidzwa kutenga isina chinhu, isina kuvandudzwa ivhu remunda.
Iyo cadastral mutengo weiyo yakatengwa chivakwa inofanira kupfuura 80 zviuru €.
Mariro. Kana uchitenga chinhu chisingazungunuke kuve muridzi, anenge achinyorera mvumo yekugara muLatvia anofanira kubhadhara mubhadharo we5% yemutengo wayo. Ndokunge, nemutengo wepasirose unobvumirwa zviuru mazana maviri nemakumi mashanu, ichave iri zviuru gumi nezviviri nemazana mashanu emadhora.
Mimwe mikana. Investment mune yemuno bhizinesi muhuwandu hweinenge isingasvike 35 zviuru €. Mune ino kesi, inotevera inotevera mamiriro inofanirawo kusangana:
Vashandi vekambani vanodarika vanhu makumi mashanu.
Kambani inobuda pagore ingangoita gumi mamirioni €.
Mari dzemitero yegore negore kune bhajeti - kubva pamakumi mana ezviuru €.
Kana uchiisa mari mubhizinesi inodarika zviuru zana nemakumi mashanu emaeuro, anenge achinyorera anokwanisa kuwana mvumo yekugara muLatvia pasina mimwe mamiriro.
Pano zvinotenderwa kunyorera tsamba yekugara kana uchivhura rezvokutengeserana sangano rine matatu mabasa kuvaLithuania vagari. Panguva imwecheteyo, zvinotora ingaite mwedzi mina kunyoresa chinzvimbo.
Mariro. Hukuru hwekudyara kwekutanga mubhizinesi hunofanira kupfuura zviuru makumi maviri nesere.
Conditions. Mutorwa ane mvumo yekunyorera tsamba yekugara mwedzi mitanhatu mushure mekuvhura bhizinesi rake muLithuania. Mugove wake muguta guru rekambani rinofanira kudarika 1/3, iye pachake ari nhengo yebhodhi kana director.
Dzimwe sarudzo. Iwe unogona zvakare kutenga rakagadzirira-rakagadzirwa bhizinesi muLithuania, kana kuvhura yemuno mumiriri hofisi yekambani yako yakanyoreswa kune imwe nyika. Muzviitiko izvi, izvo zvinodiwa zvinoramba zvakafanana - kugadzirwa kwenzvimbo nhatu muvashandi vevagari veLithuania.
Kune vapfumi vatorwa muLuxembourg, zvinopihwa kupihwa mvumo yekugara pasina mvumo yekushanda nekuita bhizinesi. Iye anenge achinyorera anofanirwa kunyora mamiriro ake emari uye otenga imba mune ino duchy.
Mariro. Munyoreri wemvumo yekugara muLuxembourg anofanirwa kunge aine zvinopfuura zviuru makumi maviri nezvishanu € paaccount yake.
Dzimwe sarudzo. Zvinotenderwa kuti mutorwa awane mvumo yekugara aine kodzero yekushanda kana achipedzisa kondirakiti yebasa nerimwe remasangano emuno. Iye anotama anofanira kuita semushandi.
MuMalta, mvumo yekugara inopihwa kwete kwete chete yekutenga, asi kunyangwe kana uchihaya imba.
Mariro. Kumaguta akasiyana nematunhu enyika, pane zvikumbaridzo zvakasiyana zvekudyara mukutenga zvivakwa. Iwo anotangira kubva pa220 kusvika 275 zviuru zvemamiriyoni. Kana uchihaya zvivakwa, huwandu hwemabhadharo egore negore hunofanira kupfuura 9,6 zviuru zvema euro mumaguta makuru, uye zviuru zviuru zvisere mumaruwa. Zvinoenderana nemutemo weMalta, roja akagamuchira mvumo yekugara achazobhadharawo mutero wemakumi mashanu ezviuru euros yemhuri yese gore rega.
Conditions. Kunyoreswa kwemvumo yekugara kunotenderwa pamberi pekutenga kana kubhadharisa transaction. Mune ino kesi, iko kunyorera kunoonekwa nevakuru vekufamba mukati memwedzi misere. Kana zvabvumidzwa, mutorwa anofanira, mukati megore rinotevera, atenge zvivakwa pano kuti uve wega kana rendi. Zvikasadaro, chimiro chayo chinodzimwa.
Dzimwe sarudzo. Anogara zvachose munyika ane imwe nhanho yehupenyu hwakanaka anokwanisa zvakare kugamuchira mvumo yekuMalta yekugara. Chidimbu chidiki chemari yegore negore hachifanirwe kunge chiri pasi pe25 zviuru zviuru. Zvakare, neimwe nzira, iye anonyorera anogona kunge aine yake yekuchengeta huwandu hunopfuura hafu yemiriyoni euros. Kana iwe uchironga kutamira kuMalta nemhuri yako, saka iyi imwezve yekuwedzera zana nemakumi mashanu ezviuru yenhengo yega yega. Munguva pfupi yapfuura, chirongwa chekutama "Residence mvumo yekudyara" yakaunzwa pachitsuwa.
Kune mikana yakajairika yeEU yekuwana mvumo yekugara - basa, kudzidza kunzvimbo yemunharaunda yekudzidzisa, kubatana kwemhuri, nezvimwe. Pakati pezvipo zvakakosha pane mvumo yekugara kune vezvemabhizimusi vekunze vanoshuvira kuvhura yavo bhizinesi muhumambo uhu. Iyo inonyanya kufarirwa fomu yekuita bhizinesi pano ndeye LLC. Zvinotora avhareji yemwedzi mina kuvhura nzanga.
Mariro. Iko capitalization yekambani yekutengesa pakuvhura kwayo inofanira kupfuura 18 zviuru €.
Mitemo yekutamira kune dzimwe nyika yePoland inobvumidza kupihwa mvumo yekugara kune muzvinabhizimusi wekunze kana akaita semuridzi kana maneja wekambani.
Mariro. Iyo capitalization level yekambani yakanyoreswa muPoland inofanira kudarika 1300 €, uye avhareji mari yegore negore ndeye 13 zviuru €.
Conditions. Vashandi vekambani yekunze vanofanirwa kuve vangangoita vagari vaviri vePoland. Mushure memakore mashanu, muzvinabhizimusi wekunze ane mvumo yekunyorera kugara zvachose.
Dzimwe sarudzo. Imwe nzira ndeyekuvhura kambani yekutengesa, uko mugari wePoland, kana chero nyika dzeEU, achadomwa semutungamiriri kana sachigaro webhodhi. Mitemo yekunyoresa inoramba yakafanana.
Kune chirongwa chekutama chekuwana mvumo yekugara muEurope munguva pfupi. Saka, kana uchitenga zvivakwa, mutorwa achakwanisa kuwana mvumo yekugara mukati memwedzi miviri. Zvakare, izvi zvinoshanda kwete chete kune iye anenge achinyorera iye, asi nekukasika kumhuri yake yese pasina chero mari yekuwedzera.
Mariro. Unogona kutenga chimwe kana akati wandei zvinhu kamwechete. Mamiriro acho ari kuti mutengo wese wekutenga unofanirwa kudarika zviuru mazana mazana maviri nemakumi mashanu. Mari yekuwedzera yekunyoreswa kweiyo chinzvimbo mamwe gumi ezviuru euros.
Conditions. Izvo zvinodikanwa kuti utenge usati waendesa kunyorera kune ekufambisa masevhisi. Iko kunyorera kupihwa chinzvimbo kunofanirwa kuendeswa kusati kwapera mazuva makumi mapfumbamwe kubva pazuva rekupinda munyika.
Iyo yakasarudzika kupihwa kwePortugal mvumo yekugara inopihwawo kune vanoita mari avo vakaisa mari inosvika miriyoni euros muhupfumi hwenyika. Maitiro ekudyara anogona kuva chero - kutenga kwemasheya kana kumwe kuchengetedzeka, chidimbu mukambani yechiPutukezi yekutengesa.
Kutanga bhizinesi muPortugal, ichipa zvinopfuura gumi zvigaro zvevagari vePortugal. Rudzi rwekutanga rwekuita bhizinesi pano yakavharwa yekubatanidza-stock kambani.
Kuwana mvumo yekugara muRomania inzira yakaoma kwazvo. Vashambadzi vekunze pano vanomhanyisa neakakosha sevhisi yebasa ARIS. Vashandi vayo vanonyatso tarisa chirongwa chega chega chekudyara chakarongwa nevamabhizinesi vekunze.
Mariro. Kuvhura bhizinesi kana kuisa mari, makambani eRomania anofanirwa kushandisa inosvika zviuru zana zvemadhora.
Conditions. Iyo yakazara bhizinesi chirongwa inoendeswa kune vakuru vakuru veARIS, iyo inopa 15 nzvimbo dzevaRomania vagari. Mvumo yekugara yevanamuzvinabhizinesi vekunze inopihwa kwegore, mushure meizvozvo inofanirwa kuivandudza pagore kwemakore mashanu. Pakupera kwenguva ino, zvinotenderwa kunyorera kugara zvachose.
Kuwana mvumo yekugara muSlovakia hakuitwe nechimwe chikonzero, asi nekuda kwekuzadziswa kwezvimwe zvinangwa nemutorwa:
Kutanga rako bhizinesi.
Zvesainzi uye zvedzidzo zviitiko.
Izvo zvakare zvinokwanisika kuwana Slovak yekugara mvumo, kana iwe uine kadhi rebhuruu reEuropean Union, pahwaro hwekubatanazve kwemhuri, uri wedzinza reSlovak Sarudzo iri nyore kwazvo yevaRussia kuvhura uye kumhanyisa bhizinesi ravo muSlovakia. Iyo yakasarudzika fomu yemabhizimusi chiitiko ndeye LLC. Kunyoresa kazhinji hakutore anopfuura mwedzi mina kusvika kumashanu.
Mariro. Munyoreri wemvumo yekugara yeSlovak anofanirwa kuve neinenge 23 zviuru € mubhengi rebhangi. Iyo mvumo capital yekambani inofanirwa kuvhurwa inodarika zviuru zvishanu €.
Conditions. Iye anenge achinyorera anofanira kunyora kugona kwake kwemari, kuendesa chirongwa chebhizinesi kumabasa ekufambisa, kutenga kana kuroja nzvimbo yekugara munyika, uye oburitsa inishuwarenzi yekurapa. Mvumo yekugara inogona kupihwa kwenguva inosvika mwedzi mitanhatu kusvika kumakore maviri, mushure meizvozvo inofanirwa kuvandudzwa.
Nzira yakapusa uye inokurumidza yekuwana mvumo yekugara muSlovenia ndeyekunyoresa kambani yako pano kana kuisa mari mukambani iripo yemuno. Vanhu vaviri vanogona kunyorera chinzvimbo ichi kamwechete: muridzi wekambani, ane angangoita 51% yemari yakabvumidzwa, uye director wayo. Izwi rekutarisa chikumbiro chekupa chinzvimbo rinotora approx. 1 mwedzi.
Mariro. Bhizinesi rekudyara rinofanirwa kusvika ku50,0 zviuru.
Conditions. Munhu anovhura kana kuwana kambani muSlovenia anofanirawo kutenga kana kubvarura nzvimbo yekugara pano. Kuwana mvumo yekugara zvinogoneka chete mushure mekunyorwa zviri pamutemo kwekambani nevatungamiriri vemitero. Maitiro aya anogona kutora 3 kusvika kumwedzi mishanu. Uyezve chinzvimbo - chinopa mutorwa kodzero yekushanda muEU.
Mhando mbiri dzemvumo yekugara dzinopihwa pano:
Zvikamu "A" - zvinopfuurira, zvakaburitswa makore mana. Yakakodzera kutanga uye kuita bhizinesi muFinland.
Chikamu "B" - chenguva pfupi, yenguva yekudzidziswa kana kushanda pachibvumirano chakatemwa.
ChiFinland mutemo wekupinda munyika unonyanya kuvimbika kune vekunze vatengesi. Huwandu hwekuramba kupihwa mvumo yekugara kune vanhu vakadaro itsika shoma, uye maitiro ekuwana chinzvimbo haapfuure mwedzi mitanhatu pakureba.
Mariro. Mari inotenderwa yekambani yakavhurwa nemutorwa muFinland inofanira kudarika € 2,5 zviuru, uye mari yemunhu anokumbira inofanira kudarika € 1,5 zviuru.
Conditions. Inenge hafu yemitezo yebhodhi yebhizinesi rebhizimusi inofanirwa kuve vagari veEuropean Union. Mumwe muzvinabhizimusi wekunze anofanirawo kupa rakadzama bhizinesi chirongwa. Zvikasadaro, mutemo weFinland unovimbika kune vekunze vezvemabhizimusi mari:
Iko hakuna kudikanwa kwehukuru hwehuwandu hwekambani.
Iko hakuna chirevo mune fomu yekugadzirwa kwemabasa kune vagari veFinland.
Iko hakuna kuderera kwakadzika kweiyo mari yekudyara.
Izvo zvakakwana kuti kambani ishande, mitero inoenda kubhajeti, uye mibairo inobhadharwa kune vashandi.
Kune vakapfuma mune zvemari muFrance, pane chirongwa chekupa yakasarudzika mvumo yekugara. Chokwadi, haina kupa mvumo yekuita bhizinesi repachivande kana basa. Maitiro ekunyoresa anotora kusvika kumwedzi mitanhatu.
Mariro. Mune chero emabhangi eFrance, anenge achinyorera anofanira kunge aine zviuru makumi matatu zveefa. Uyezve huwandu hwakaenzana kune imwe neimwe yemhuri yake inonyorera gwaro rekugara
Conditions. Kuti usimbise kugona kwemari, unofanirwa kupa vashandi veinzvimbo yekufambisa magwaro padanho remari, inivhoyisi uye chibvumirano chekutenga kana rendi yenzvimbo yekugara muFrance.
Investment. Kuti uwane mvumo yekugara yakasarudzika, iwe unofanirwa kuisa mari inokwana € 10 mamirioni muhupfumi hweFrance. Muchengeti anofanira kuwana makumi matatu kubva muzana emasheya kana migove yesangano rezvokutengeserana. Kana kambani nyowani ikagadzirwa, vashandi vayo vanofanirwa kuve nevashandi vanopfuura makumi mashanu.
Nzvimbo yekutengeserana. Inopihwa nemaneja wekambani nemhuri yake yepedyo.
Yakasimudza vashandi. Inotumirwa kune vashandi vekunze mafemu, matavi uye vamiririri mahofisi akanyoreswa muFrance.
Pano, mugari wekunze anoita zvakanaka anogona kuwana nyore mvumo yekugara kana achinyoresa kambani yekutengesa muCroatia.
Mariro. Huwandu hushoma hwemari yakabvumirwa hausi pasi pe2,7 zviuru €.
Conditions. Mvumo yekugara anonyorera ane mugove weinenge 51% mukambani yakanyoreswa muCroatia. Kana izvi zvikaitika, mutorwa anowana rezinesi rinomutendera kuti aite zvekugadzira nekutengesa zviitiko. Panguva imwecheteyo, hazvirambidzwe kana kambani iine chikamu che100 muzana yemari yekunze.
Dzimwe sarudzo. Zvinotenderwa kunyorera mvumo yekugara kune vekunze vane chinzvimbo chekutarisira mukambani yakanyoreswa muCroatia. Saizi yemubhadharo inofanira kunge iri padanho revhareji yenyika, ndiko kuti, anenge 1,1 zviuru €. Iko capitalization yesangano yakavhurwa nemutorwa inofanirwa kudarika zviuru gumi nezvitatu €, uye vashandi vayo vane vagari vatatu veCroatia.
Zviri nyore kunyorera mvumo yekugara kune bhizimusi investor muCzech Republic pane kune vamwe vanyoreri. Maitiro akajairika emabhizimusi pano ndeye LLC, nekuti bhizimusi rega rega rinobhadhara mutero wakakura. Kunyoresa kunotora kusvika pamwedzi, uyezve imwe mwedzi yakati wandei uchafanirwa kumirira mvumo yekugara. Mhuri yese yemutorwa inogona kuwana chinzvimbo ichi.
Mariro. Yese mutengo:
Kunyoreswa kwemvumo yekugara kubva ku1 zviuru €.
Kunyoresa kwe LLC - 3 zviuru, iine capitalization ye7,5 zviuru €.
Kunyoreswa kweJSC - zviuru zvishanu, iine capitalization ye5 zviuru €.
Iye anenge achinyorera anofanira kunge aine anodarika € 3 muaccount.
Conditions. Iwe unofanirwa kunyoresa kambani usati wanyorera kuCzech mvumo yekugara. Iye anenge achinyorera anogona kuve muvambi wekambani kana director, aine rezinesi rinoenderana.
Iyi humambo hweScandinavia ndeimwe yenyika dzakavharwa kwazvo kune vanoenda kuEurope. Kuti uwane mvumo yekugara pano, muzvinabhizinesi anofanira kunyoresa JSC pano.
Mariro. Kunyoresa kambani muSweden kunodhura kubva ku10 zviuru, kuwana mvumo yekugara - imwe 2 €. Kune nhengo dzemhuri, iwe zvakare unozofanirwa kubhadhara imwe 250 €. Iye anenge achinyorera anofanira kunge aine anopfuura zviuru makumi maviri nezviviri paaccount, uye imwe zviuru gumi nemazana mashanu zvemurume kana mukadzi uye zviuru zvishanu nezviuru zveumwe neumwe wevana.
Conditions. Mugari wemuEuropean Union chete ndiye ane mvumo yekunyorwa semaneja wekambani.
Vanhu vanosarudza kuwana mvumo yekugara muEstonia vanopihwa mukana wakadai wekudyara muhupfumi hwenyika.
Mariro. Iwo mashoma mashoma ekudyara mari anobva ku66 €, muchimiro chemhando dzinotevera dzemidziyo:
Mari yako wega yebhizimusi investor.
Mutengo wepfuma huru yekambani ichangovhurwa.
Conditions. Kambani yakanyoreswa asi isiri kuburitsa mari inoiswa pasi pakarepo sekunge ingangoita yekunyepedzera. Naizvozvo, kambani yakavhurika inofanirwa kuburitsa mari, zvikasadaro muridzi wayo anogona kurasikirwa nemvumo yemvumo yekugara. Vashandi vanofanirwa kuve vagari veEstonia. Kunyoresa kambani, muzvinabhizimusi wekune imwe nyika anofanirwa kupa chirongwa chakadzama chebhizinesi, zvinyorwa pakatangira guta rekutanga uye chibvumirano chekutenga kana kubhadharisa nzvimbo yekugara muEstonia.
RESIDENCE Mvumo MUNYIKA DZENYAYA DZEEUOPA KUNZE KWEEU
MuAlbania, zvinotenderwa kuwana mvumo yekugara pane "D" vhiza kune vanhu vane yavo imba kuno. Sezvo nyika ino yeAdriatic ichinyanyo kufarirwa nevadi vemazororo egungwa, iyi sarudzo iri mukuda kukuru.
Mariro. Pakati peguta guru renyika, mutengo pamamita mita imwe yekugara real estate iri kubva ku800 €, uye mumasabhabha eTirana - 350. Munzvimbo dzekushanyira, mutengo weimba unogona kukwira kusvika ku1200 € pamamita mita.
Conditions. Pamwe pamwe nechikumbiro, iwe uchafanirwa kupa chitupa chekuti muridzi wenzvimbo yekugara uye huwandu hwemari yekurarama. Pakutanga, chinzvimbo chinopihwa kwegore, mushure mekuvandudzwa - zvakapetwa kaviri kwemamwe makore. Ipapo iwe unogona kunyorera kugara zvachose.
Dzimwe sarudzo. Chirongwa chakareruka chekutora mvumo yekugara yeAlbania inoshandawo kune vanoita bhizinesi. Kunyoreswa kwekambani nyowani pano hakutore mazuva anopfuura 1-5, uye mutengo wayo uri pamusoro pe250-400 €. Huwandu hwemari yemari haina kutsanangurwa zviri pamutemo. Vavaki vemari vakaisa mari inodarika € 100 muhupfumi hwenyika vanobva vapihwa chizvarwa cheAlbania.
Mune ino diki Pyrenean hukuru, pane akati wandei sarudzo dzekuwana pekugara mvumo:
Investment mubhizinesi reAndorran.
Kutengwa kwezvisungo zvehurumende.
Muzviitiko zviri pamusoro, hushoma mari yekudyara inotangira kubva ku350 zviuru €. Zvakare, iye anenge achinyorera anofanira kunge aine pekugara kana yekurenda pano, uye ogara muhukuru hweanenge mazuva makumi mapfumbamwe nemazana gore rega
Mariro. Kune iyo depository account mune yemuno mari homwe INAF, iwe unofanirwa kuendesa makumi mashanu ezviuru € kune iye anenge achinyorera iye, pamwezve imwe zviuru gumi kune yega yega yemhuri yake Pane zvinodiwa kune avhareji yemari inowanikwa pagore: zviuru makumi matatu nematanhatu kune anenge achinyorera uye zviuru gumi nembiri zveavo vanovimba naye.
Conditions. Sezvo Andorra isiri chikamu cheEU, iyo mvumo yekugara haingoerekana yapa kodzero yekugara muEuropean Union. Kuti uite izvi, uchafanirwa kunyorera vhiza yeSchengen zvakasiyana.
Nzira yakapusa yekuwana mvumo yekugara muBosnia neHerzegovina ndeyekunyora rako wega bhizinesi. Izvo zvikumbiro zvinounzwa pano kune vezvemabhizimusi makambani mashoma.
Mariro. Iye anenge achinyorera anofanira kunge aine zvinopfuura 1,5 zviuru € muaccount account.
Conditions. Kunyoresa zviitiko zvinowanzo kutora kubva pamasvondo maviri kusvika kumana, pamwe nemari yakafanana ichatora kubvumidzwa kwekugara. Inopihwa kwemakore matatu, kana iwe uine yako imba kana reisi kwenguva yemwedzi mitanhatu kana kupfuura.
Dzimwe sarudzo. Kutenga zvivakwa pamutengo chero upi. Iwe unozofanirwa kubhadhara mutero mutero we2% yemutengo wekutenga uye unosvika chiuru euros yebasa revanyanzvi.
Zvakaoma kwazvo kuwana mvumo yekugara muIceland, kunyangwe pakutenga zvivakwa pachitsuwa ichi nekuvhura yako wega kambani. Nyika ine zvirambidzo zvakanyanya mundima yekutama, uye kune zvisaririra chete kune avo vanopa mukusimudzira kweIcelandic macroeconomy. Mune zvimwe zviitiko, zvimwe izvo mutengesi wemabhizimusi anogona kuvimba nazvo kupihwa kweakawanda ekupinda visa.
Mune alpine micro-state, sarudzo iri nyore kwazvo yekuwana mvumo yekugara ibasa repamutemo mune imwe kambani yemuno. Asi pane chipingamupinyi chimwe pano: vanhu chete vatove nemvumo yekugara kana mune chero nyika yeEU ndivo vanogamuchirwa kuti vashande muhukuru. Zvakare, iye anenge achinyorera anoda kuve neakasarudzika hunyanzvi huri kudiwa muLiechtenstein.
Izvo zvinokwanisika kuwana mvumo yekugara pano kana uchinyoresa kambani nyowani.
Conditions. Iye anonyorera anofanira kunge ari iye muridzi wekutengesa real estate mudunhu reMasedhonia - poindi yekutengesa, hofisi, musangano wekugadzira. Mitemo yeMasedhonia yekutama haigamuchire hukama hwenyika mbiri. Naizvozvo, maRussia anosarudza kugara mune ino yaimbova Yugoslavia republic vanofanirwa kusiya pasipoti yavo yeRussia.
Hukuru hweMonaco ndeimwe yenzvimbo dzepasi dzekutandarira mugungwa uye kubhejera. Saizvozvo, mutengo wekurarama wakakwira kwazvo pano, kunyangwe tichienzanisa neFrance neItari iri pedyo. Naizvozvo, vanhu vakapfuma kwazvo vachakwanisa kugara pano. Sechisimbiso cherusununguko rwavo rwemari, mutorwa anofanirwa kuve neakaundi yebhangi ye250 zviuru €. Kufunga kwechikumbiro chakatumirwa kunotora anenge mavhiki mashanu.
Mamiriro. Kuti uzarure bhizinesi muMonaco, unoda mvumo yakasarudzika kubva kuzviremera uye kutenga hofisi kana yekutengesa zvivakwa munharaunda yehukuru. Iwo mashoma capitalization yekambani ichangovhurwa anobva ku15 zviuru €. Pakutanga, chinzvimbo chinopihwa kwegore, zvobva zvateerana kwemakore maviri ne2. Pakupera kwenguva ino, mutorwa anowana Monegasque Anosarudzika Mugari Visa, iyo inoshanda kwemakore gumi. Inogona kuwedzerwa chero nhamba yenguva, pasina chero kurambidzwa.
Nzira yakapusa yekuwana mvumo yekugara yeNorway ndeyekuvhura rako bhizinesi pano.
Mariro. Mari yekunyoresa ichaita kusvika zviuru gumi nezvitatu € - uku ndiko kuwanda kwemari inotenderwa yekambani kuvhurwa inofanira kunge iri.
Conditions. Iye munyoreri anofanira kuve neruzivo mumunda wezvemabhizimusi uye anofanirwa kuendesa rakadzama bhizinesi chirongwa kuti chiongororwe nevakuru veNorway. Nyika yeNorway chete ndiyo inogona kugadzwa chinzvimbo chemukuru kana maneja wekambani.
Mudunhu diki reSan Marino, rakakomberedzwa pamativi ese nenharaunda yeItari, nzira iri nyore yekuwana mvumo yekugara yevanhu vakapfuma. Kuti uite izvi, iwe unofanirwa kuratidza kuvepo kweinenge mazana mashanu ezviuru €, kana kutenga zvivakwa pano nemari yakafanana. Mushure mekuwana mvumo yekugara, kuti unyore kunzi mugari weSan Marino, uchafanirwa kumirira mamwe makore makumi matatu.
Kupa mvumo yekugara yeSerbia, zvakakwana kutenga kambani yatove kushanda pano, kana nekutanga rako bhizinesi.
Mariro. Iwo mashoma anotemerwa capital anofanira kunge angangoita mazana mashanu euros, uye maitiro ekunyoresa anodhura 500 €. Kune akabatana-masheya makambani, huwandu hwemari inotenderwa hwakakwira:
JSC - zviuru gumi.
CJSC - 25 zviuru.
Akaundi yebhizimusi inofanirwa kunge iine anopfuura zviuru mazana matatu nezviuru mazana masere.
Conditions. Pakati pezvimwe zvinodiwa: kuvepo kwebhizinesi chirongwa uye dzimba dzevanhu kana dzekurenda muSerbia.
Dzimwe sarudzo. Paumbowo hwekugara kwake uye kuwanikwa kweimba, mutorwa anowana mvumo yekugara kwenguva yemakore matatu. Huwandu hwekutenga zvivakwa hauna kusimbiswa nemutemo, kunyangwe zvirongwa zvakadaro zviri kutotarisirwa nevakuru veSerbia.
Nzira iri nyore yekuwana mvumo yekugara yeTurkey ndeyemamiriro epfupi-kwenguva - kwete anopfuura gore rimwe. Vanomuburitsa nekuda kwezvikonzero zvinotevera:
Kuroora nemugari weTurkey.
Mariro. Kuti uwane chinzvimbo, mutorwa anofanirwa kuve neinenge zviuru zvishanu nezviuru mazana mashanu paaccount yake. Mutengo wekutenga kwezvivakwa hauna kuganhurirwa munzira ipi neipi. Nezve maitiro ekunyoresa, uchafanirwa kubhadhara anenge zviuru zviviri €.
Parizvino, chirongwa chiri kuunzwa muMontenegro icho chinokutendera iwe kupa mvumo yekugara yemuno kune vese varidzi vemba munyika. Kuti uite izvi, iwe unofanirwa kuratidza humbowo hwekuvapo kwe3,65 zviuru zveeuro pane account yemunyoreri. Imwe sarudzo kuvhura rako bhizinesi bhizinesi munyika ino.
Mariro. Mitemo yemunharaunda yekubuda kwevanhu yakatendeka kune vanoita bhizinesi. Kuti uzarure kambani yako, pano zvakaringana kuve nemari ye1 €, uye muakaundi yebhangi - 300 €.
Conditions. Iye anenge achinyorera anofanira kunge aine inishuwarenzi yekurapa, mari muaccount uye asina chinyorwa chematsotsi.
Nzira iri nyore yekugara muSwitzerland ndeye kunyanya vapfumi vatorwa. Kune vamiriri veVIP kutama, kunyoreswa kwenzvimbo yemvumo yekugara haitore anopfuura mwedzi mitanhatu. Huwandu hwekudyara mune iyi kesi hunofanirwa kuve hwakakosha kwazvo. Asi zvakanakira kugara muSwitzerland zvakatowanda - kubva pamwero wepamusoro wehupenyu nekuchengeteka, kusununguka kufamba munzvimbo yeSchengen.
Mariro. Pane nzira mbiri dzekudyara muhuwandu:
Passive, muchimiro chemarara-sum mutero wakabhadharwa kuSwiss state treasure. Ukuru hwayo ndeye 100 zviuru zveeuros pagore.
Investments mubhizinesi rinoshanda - kubva pamiriyoni imwe €.
Maitiro ekunyoresa anodhura CHF 50.
Conditions. Wese muzvinabhizinesi anoda kunyoresa bhizinesi rake muSwitzerland anotarisana nedanho rakakura rekusarudza. Kune vazhinji vanonyorera, uye vane masimba vanosarudza vakakodzera kwazvo pakati pavo. Naizvozvo, kubhadhara iyo lump-sum mutero ndiyo imwe nzira yechokwadi yekuwana iyo Swiss mvumo yekugara.
Kuwana mvumo yekugara muEurope
Sezvauri kuona, nyika yega yega yeEurope inopa yavo yakasarudzika sarudzo. Naizvozvo, wese weRussia anoda kuenda ikoko anofanirwa kuenderera kubva kunhamba dzinoverengeka dzekuzviisa pasi. Kune vagari vakapfuma, sarudzo inobatsira zvikuru ndeyekudyara muzvivakwa. Kana iwe uchida kufamba zvakasununguka muEuropean Union, wobva wasarudza mvumo yekugara munyika dzeSchengen.
↑ mvumo yekugara mueuropean states ↑ mvumo yekugara mvumo muEurope ↑ kupi kuri nyore uye nzira yekuwana mvumo yekugara ↑ ndeipi nzira iri nyore yekuwana mvumo yekugara ↑ nzira yekuwana mvumo yekugara ↑ tora mvumo yekugara muEurope ↑ maitiro ekuwana mvumo yekugara muEurope ↑ kupi kuri nyore kuwana mvumo yekugara muEurope ↑ kuwana mvumo yekugara muEurope ↑ mvumo yekugara mune zvisiri eu european nyika ↑ mvumo yekugara munyika dzeeurope dzisina kuiswa mueu ↑ mvumo yekugara kwete eu ↑ mvumo yekugara kwete mune eu nyika ↑ Europe yekugara mvumo ↑ Mvumo yekugara yeEU ↑